Momba anay - kejia
Fiarovana manokana sy fahasalamana anaty trano
Sivana karbaona navitrika
Cartridge sivana fanadiovan-drivotra
Fanadiovan'ny rivotra HEPA
Sivana nylon voalohany
Car sivana kabine
Sivana fitaovana fanadiovana
Sivana fanadiovana vacuum
Sivana avo lenta miaraka amin'ny Separator
Sivana pleat mini tena mahomby
Sivana avo mahazaka hafanana avo
Sivana avo lenta avo lenta
Tanan-drano sivana avo lenta sivana
V-karazana sivana haavo avo lenta amin'ny rivotra
Sivana tontonana voalohany
Sivana voalohany amin'ny tontonana
Vokatra voalohany vita amin'ny vy lovia vy sivana vy harato sivana
Taratasy fanivanana voalohany
Sivana voalohany amin'ny tabilao
Fitaovana sy efitrano fidiovana ao amin'ny efitrano fidiovana
Vovonana fanivanana fanaka FFU
Hatramin'ny niorenany tamin'ny 2000, kejia / Afus dia manaraka ny foto-kevitry ny soatoavina mifototra amin'ny mpanjifa ary manolo-tena hanome vahaolana teknolojia madio madio ho an'ny mpampiasa. Ny atiny dia misy: drafitra fakan-kevitra momba ny matihanina sy lalina, vokatra avo lenta sy marina ary serivisy fanodinana tonga lafatra sy mety. Izy io no fototra ahazoantsika fitomboana eo amin'ny tsena. Amin'ny maha iray amin'ireo hery miasa sy manandanja indrindra amin'ny indostrian'ny fanadiovana sy ny sivana dia mandray anjara amin'ny fifaninanana eo amin'ny tsena manerantany isika ary eken'ny mpanjifa betsaka. Nanjary iray amin'ireo mpanamboatra mahazatra ny vokatra filtration iraisam-pirenena sy ny fitaovana fanadiovana isika. Ny vokatray rehetra dia natao, novokarina ary notsapaina teo ambanin'ny fibaikoan'ny rafitra kalitao ISO9001 sy ISO / tsi16949. Izy ireo dia ampiasain'ny mpanjifa amin'ny indostrian'ny filtration sy ny fanadiovana ary amidy eran'izao tontolo izao.
Ny vokatray dia afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny mpanjifa amin'ny vokatra filtration sy fitaovana fanadiovana ary manome serivisy matihanina sy fanohanana ara-teknika. Miaraka amin'ny famokarana matihanina ny karazan-karazany voalohany, salantsalany, fahombiazana avo lenta, sivana rivotra avo lenta sy fivoahan'ny rivotra, FFU, kapila mikoriana laminar, hood milanja, isolator ary fitaovana fanadiovana hafa. Ny vokatra dia manarona ny fahasalaman'ny tena, ny fahasalaman'ny rivotra anaty trano, ny fahasalaman'ny tontolo iainana amin'ny toerana ampahibemaso, ny sivana amin'ny indostrialy ary ny toerana fanasiana rivotra hafa.
Ireo mpanjifa indostrialy dia mandrakotra ny semiconductors puce, sakafo sy fanafody, fitsaboana, efitrano fandidiana, indostrian'ny tafika, indostria simika, andrim-pikarohana siantifika ary laboratoara oniversite; ny mpanjifa ara-barotra sivily dia mandrakotra ny fianakaviana, ny sekoly, ny hotely, ny banky, ny orinasa sy ny andrim-panjakana ary ny karazana toeram-bahoaka.
Sivanin'ny mpanadio banga
Sivana fanivanana ny dehumidifier
Sivana fanivanana ny fanadiovan-drivotra
Sivana G4-U15 ho an'ny Indostria
FFU, Fandroana rivotra
Mpamafa efitrano madio
Efitra madio fanjifana
Nomena mari-pankasitrahana orinasa 3A izahay, orinasa teknolojia avo lenta, orinasa mifikitra, orinasa azo itokisana ary voninahitra hafa, manantena ny hiorina amin'ny fiaraha-miasa maharitra aminao.
Rehefa liana amin'ny iray aminay izahay, dia jereo ny lisitry ny vokatra,
azafady azafady mba mifandraisa aminay hanontany.
Telefaona: +86 18896738576